Chelsea Oo Ku Dhawaaqday Qasaaro £49.4 Milyan Sannadka 2013.
Chelsea ayaa ku dhawaaqday qasaaro wadar ahaan gaareysa £49.4 milyan xisaab xirkooda 30kii June 2013.
Dhaqaale ahaan lacagta soo xorootay oo aheyd 255.8 milyan ginni ayaa aheyd lacag rikoor u ah kooxda, laakiin iyagoo noqday kooxdii ugu horeysay ee iyagoo difaacanaya Champions League lagu reebo wareego group-yada ayaa hoos u dhac ku sameysay dakhliga u soo xarooda.
Si kastaba, inkastoo ay faa’ido sameeyeen 2012 oo gaareysa 1.4 milyan ginni, Chelsea ayaa sheegtay inaysan halis ugu jirin inay ku dhacdo sharciga dhaqaale wanaaga Uefa.
Gudoomiyaha Chelsea Bruce Buck ayaa yiri: “Tan iyo bilowgii uu Ibrahimovic kooxda iibsaday hamigeena waxa uu ahaa inaan dhaqaale ahaan isku filnaano islamarkaana xasilooni ka qabno, islamarkaana aan dhaqan gelino sharciga dhaqaale wanaaga Uefa.
“Waan ku faraxsanahay sidaasi darteed inaan la kulmi doono sharciyada ay Uefa noo dejisay marka ugu horeysay ee ay qiimeyn nagu sameyn doonaan, waxaana dhirandhirinteena inoo soo baxday inaan horumar sameyneyno dhaqaale ah islamarkaana aan sii wadno inaan armaajada koobab ku darno taasoo ah yoolkeena ugu weyn.”
Kooxda Man City Oo Laba Ciyaaryahan Ka Doonaysa Kooxda Real Madrid.
Kooxda Man City ayaa doonaysa inay soo xero galiso inta uu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda bisha janaayo labada laacib ee u ciyaara kooxda Real Madrid ee dalka Spain Sergio Ramos iyo Iker Casillas.
Shabakada CaughtOffside ayaa shaaca ka qaaday in tababaraha kooxda Man City Manuel Pellegrini uu aad u xiisaynaayo labadaan laacib ee ree Spain.
Shabakadaan ayaa intaa ku daratay kadib isku dhicii udan beeyay ee Ramos iyo madax waynaha kooxda ay keentay in macalinkaan ree Chile ee Pellegrini uu ku fikiro inuu lasoo wareego bisha janaayo hadii ay usuurto galayso, sidoo kale wuxuu doonayaa gool hayaha aan booska ka haysan kooxda Real Madrid ee Iker Casillas oo doonaya inuu xajisto booskiisa koobka adduunka ee qaranka Spain.
Kooxda Man United Oo Doonaysa Daafaca Kooxda Real Madrid Marcelo.
Kooxda Man United ayaa doonaysa inay soo xero galiso daafaca kooxda Real Madrid Marcelo, David Moyes tababaraha kooxda Real Madrid ayaaa u arka daafacaan mid ku haboon kooxdiisa si ay ugu soolaabtaan tar tanka horyaalka ingiriiska markale.
CaughtOffside ayaa daha ka qaaday in kooxda Man United ay doonayso laacib kaan ree Brazil oo 8 sano la joogay kooxda ree Spain, lakiin kooxda Real ayaan la ogayn sida ay ku fasixi doonto laacib kaan maadaama uu kooxda muuhiim ka yahay.
Tababraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa u arka Marcelo mid ka mid ah laf dhabarta kooxdiisa xili ciyaareed kaan, waxaana muuqanaya in kooxda Man United ay ku adkaan doonto helitaanka laacib kaan bisha janaayo.
Mesut Ozil Oo Dhaawacmay Iyo Mudada Uu Maqnaanayo Oo La Shaaciyay.
Mesut Ozil ayaa ka maqan kooxda Arsenal ee u safarat St James Park maanta halkaasoo ay kula ciyaarayaan kooxda Newcastle United.
Tababaraha Arsenal ayaana ciyaarta ka hor u sheegay SKy Sports in Mesut Ozil uu soo gaaray dhaawac garabka ah taasna ay sabab u aheyd inuu seego kulanka muhimka ah ee ay la leeyihiin Newcastle.
Arsene Wenger ayaa yiri: “Waan jeclaan lahaa in Mesut Ozil uu halkaan nala joogo, laakiin waxa uu u dhacay garabkiisa, waxaana uu maqnaan doonaa labo ama seddex kulan.”
Warkaan ayaa dhabarjab waxa uu ku yahay Arsenal kuwaasoo sidoo kale uu dhaawac kaga maqan yahay xiddigooda xilli ciyaareedkan Aaron Ramsey.
Arsenal ayaa kulanka maanta haddii ay ka badiso Newcastle waxa ay ku soo laaban doontaa hogaanka horyaalka Premier League.
Wilson Pirez: Suarez Xaaskiisa Darteed Ayuu Yurub U Yimid, Haddii Uusan Ciyaaryahan Ahaan Laheyn Wuxuu Noqon Lahaa Xisaabiye.
Wilson Pirez oo ah ninkii soo indha indheeyay markii ugu horeysay Suarez islamarkaana dawaday isagoo sagaal sanno jir ah ayaa ka hadlay nolosha xiddiga reer Uruguay.
Pirez ayaa loo arkaa ninkii arkay tayada Luis Suarez markii uu yaraa, waxaana uu wax badan ka ogyahay noloshiisa gaarka ah.
“Waxaan mar walba xusuustaa in Luis uu jeclaa maadada xisaabta” ayuu yiri Pirez sida ay qortay Sunday Mirror.
“Marnaba kama uusan cabanin shaqo guriga loo soo dhiibayay ee madada xisaabta sababtoo ah waa uu ku riyaaqayay.
“Danbi ayay ahaan laheyd haddii uu noqon lahaa wax aan ka aheyn ciyaaryahan laakiin haddii uusan wadadaas qaadi laheyn waxa uu noqon lahaa xisaabiye.
“Waxa xaqiiq ahaan bedelay Luis waa markii uu la kulmay xaaskiisa Sofia, iyadana ayaana amaan badan ku leh xirfadiisa ciyaareed iyo meesha uu haatan joogo. Waad arki kartay in jaceyl uu hayay. Dadka waxa ay u maleeyaan in Luis uu Yurub u yimid xirfadiisa kubada cagta, laakiin waxa uu u yimid Sofia darteed.
“Iyada iyo qoyskeeda ayaa u guuray Europe, waana uu xamili waayay inay kala tagaan. Laga bilaabo maalintaas waxa uu sarre u qaaday ciyaartiisa si uu u helo fursad uu ugu dhaqaaqo Europe. Kama uusan fekereynin magac ama lacag, waxa uu kaliya ka fekeraya jeceyl run ah.
“Haddii aad rabto inaad aragto Luis-ka runta ah waa inaad ku ag aragto Sofia iyo caruurtiisa. Waxaan ku balanqaadayaa inaadan arki doonin nin ka naxariis badan islamarkaana ka jilicsan noloshaada.”
Real Madrid Oo Doonaysa Inay Kaga Hormarto PSG Laacibka Juventus Paul Pogba
Defence Central ayaa shaaca ka qaaday in kooxda Real Madrid ayaa doonayso laacibka kooxda Juventus Paul Pogba dhamaadka xili ciyaareed kaan si ay ugu buuxiyaan booska uu banayn doono Xabi Alonso oo loo badinaayo inuu katago kooxda.
Maamulka kooxda Juventus ayaa sheegay inay ku adkaan doonto inay ceshtaan laacib kaan kadib markii uu hormar muuqdo sameeyay, Real Madrid ayaana la sheegay inay ku darsatay qorshaha laacibiinta ay suuqa ka doonayso xaggaaga soo socda.
Real Madrid ayaa doonaysa inay laacibkaan kusoo dabto ninka ay isku wadanka yihiin ee Zinedine Zidane si uu ugu qanciyo laacibkaan inuu kusoo biiro Real Madrid, Zidane ayaa ku tilmaamay Pogba inuu la mid yahay Cristiano Ronaldo uuna awoodo inuu ku guulaysto abaal marinta xidiga adduunka.
Zidane oo qayb wayn kulahaa in Real Madrid ay soo iibsato Gareth Bale ayaa hada doonaya inuu soo afjaro heshiiska laacibka ay isku wadanka yihiin ee Pogba in kastoo la ogayn go,aanka uu qaadan doono Pogba.
Waxaa la shaaciyay in kooxda Juventus ay ku doonayso laacib kaan 60 milyan oo Euro, Real ayaana doonaysa in ay kaga hormarto kooxda PSG oo aad u xiisaynaysa laacib kaan 20 jir ka ah ee ree France.
Jose Luis Caminero: Diego Costa Kama Tagi Doono Atletico Madrid
Maamulka kooxda Atletico Madrid ayaa sheegay in laacib kooda Diego Costa uusan ka tagi doonin kooxda, isagoona xili ciyaareed kii hore u saxiixay heshiis uu kooxda kula sii joogi doono ilaa 2018.
Jose Luis Caminero Oo ka mid ah maamulka kooxda Atletico Madrid ayaa u sheegay Marca ” Diego wuxuu ku faraxsan yahay halkaan, wuxuu heshiiska noo kor dhiyay xili ciyaareed kii hore isagoona noo saxiixay ilaa 2018, hadana kuma fikirayno inaan ka iibino koox kale”.
“ Wuxuu noo muujiyay inuu doonaayo inuu kooxda lasii joogo waqti badan hadii ay suuro gasho”.
Waxaa jiray warar la shaaciyay oo ahaa in laacib kaan uu u dhaqaaqi doono kooxaha Arsenal ama Chelsea mid kooda bisha janaayo, lakiin kooxda ree Spain ayaa isku dayaysa inay laacibkan ku qanciso inuu iska sii joogo kooxdiisa.
Paris Saint-Germain Oo Isku Diyaarinaysa Inay Dalab U Dirto Lionel Messi
Tababaraha kooxda PSG Laurent Blanc ayaa sheegay in kooxdiisu ay ka mid tahay kooxo yar oo awooda inay iibsadaan laacibka kooxda Barcelona Lionel Messi waqtigii ay doonaan.
Wargayska “La Parisienne” ee kasoo baxa France ayaa sheegay in kooxda PSG ay isku diyaarinayaan inay Messi ku dal badaan 250 milyan oo Euro waqtiyada nagusoo aadan, lakiin si toos ah uma uusan shaacin waqtiga ay doonayso inay dalabka u gudbiso dhigeeda Barcelona.
Wararka ayaa intaa ku daraya in joogi taanka Zlatan Ibrahimovic uu joogo kooxda PSG ay dhib kunoqon karto in kooxdu ay si dhab ah ugu dhaqaaqdo laacib kaan maadaama uu Messi dartiis uga soo tagay kooxda Barcelona isagoona ku biiray kooxda AC.Milan ee dalka talyaaniga.
Zlatan ayaa sheegay markuu kasoo tagay Barcelona kadib in Lionel Messi uu ka mid yahay laacibiinta ugu fiican adduunka, inuu Barcelona katagana uu kadanbeeyay Pep Guardiola.
Aaron Ramsey Oo Dhaawac Ku Maqnaan Doona Kulamada Waqtiga Fasaxa.
Aaron Ramsey oo shalayto u dabaaldegay dhalashadiisa ayaa seegi doona inta ka dhiman kulamada xilliga fasaxa ka dib dhaawac soo gaaray, taasoo niyadjab ku ah Arsenal kuwaasoo soo laabasho ay sameeyeen kaga badiyay West Ham.
Ka dib afar kulan oo aysan guul gaarin tartamada oo dhan, Gunners ayaa ugu danbeyn 3-1 kaga badisay West Ham, labo gool uu dhaliyay Theo Walcott iyo gool ka yimid xiddiga soo laabtay Lukas Podolski ayaa ka dhigtay inay Arsenal ka soo kabsato gool looga hormaray uu dhaliyay Carlton Cole.
Waxaana ay bilow fiican u aheyd seddex kulan oo horyaalka ah oo ay ciyaarayaan lix maalmood gudaheed iyo kulanka FA Cup ah oo ay la ciyaarayaan Tottenham, laakiin waxaa dhabarjab ku noqday dhaawaca Ramsey.
Xiddiga reer Wales oo maalintii Boxing Day noqday 23 sanno jir ayaa lagu qasbay inuu garoonka isaga baxo daqiiqadii 65aad, iyadoo tababaraha Arsenal uu xaqiijiyay inuu ahaa dhaawac muruqa bowdada ah.
“Waxay u muuqatay in muruqaha bowdada ay kala baxeen, ma ogi qatarta dhaawaciisa inta uu la egyahay, ma ciyaari doono kulamada waqtiga ciida gaalada, maanta waxay u aheyd maalintii dhalashadiisa.” ayuu yiri Wenger.
Kevin-Prince Boateng Oo Cusbitaal Tagay Ka Dib Markii Lagu Weeraray Germany.
Boliiska Jarmalka ayaa baaraya weerar lagu qaaday ciyaaryahanka khadka dhexe Ghana Kevin-Prince Boateng maalintii 25ka December ee ciida gaalada.
Boliis u dhow goobta uu shilkaan ka dhacay Düsseldorf ayaa u sheegay wargeys maxali ah Rheinische Post in 26 jir dhacdadaan ku lug lahaa inuu ahaa xiddiga Schalke Boateng.
“Maalintii arbacada 25.12.2013, abaarihii 12:45, waxaa weerar lagu qaaday nin 26 sanno jir ah, waxaana weerarkaas geystay nin aan weli la garan”
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaana lagu waramayaa inuu soo gaaray dhaawac aan halis aheyn balse sidoo kalena aan aheyn dhaawac yar.
Waxaa lagu soo waramayaa in dhacdadaas ka dib uu Boateng ku laabtay gurigiisa ka hor inta uusan wicin boliiska.
“Waxaa jirta caalamado muujinaya in danbigaan uu xiriir la leeyahay xiriir shaqsiyadeed oo uu qeyb ka yahay 26 jirkaan” ayaa lagu yiri warbixin uu boliiska soo saaray.
Jariirada Bild ayaa iyadana sheegeysa in maalintii ciida gaalada in Boateng uu ku booqday wiilkiisa guriga xaaskiisa hore, hal mar ayaana wax lagu dhuftay isagoo ka duldhacay weelka ubaxa la dhex dhigo.
Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in Boateng uu shaqsi ahaantiisa tagay cusbitaal si looga daweeyo nabar ka soo gaaray feeraha, qoorta iyo dhabarka.